Tirada na soo booqday.	Maanta2254shalay37444Isbuucaan126020Isbuucii hore240428Bishaan812850Bishii hore1319148Maalmaha oo dhan5950168Hadda Waxaa toos ugu jiraan: 406 guests, 1 members Your IP: 67.202.9.192 , Today: Jun 20, 2013	Faahfaahin: Askartii Kenyaatiga maanta lagu dilay Gaarisa oo dhammaantood noqday Saraakiil. Written by gobal on 19 November 2012. Xaalada Magaalada Gaarisa ayaa caawa kacsan ayadoo goobo ganacsi oo ku yaala magaalada ay gubanayaan Qarax Bambaano oo xalay lagu weeraray Hoyga Guddoomiyaha Marka ugu magacaaban DF. Written by gobal on 19 November 2012. Qarax bambaano ayaa xalay lagu weeraray Hoyga Guddoomiyaha Magaalada Marka ugu magacaaban dowladda Federaalka, Dhaq Dhaqaaq Ciidan Kadib Dagaal Culus oo Xalay ka dhacay Qalimoow.
Written by Maamul on 19 November 2012. Kadib dhaq dhaqaaqyo ay maleeshiyaad taabacsan Dowladda Federaalka shalay ka sameeyeen duleedka degmada Kenyaatigu Gardarro Badanaa oo Geeri Necbaa!! Qaraxyada Nairobi.
Written by Maamul on 19 November 2012. Khasaara ba'an ayaa ka dhashay qarax weyn oo shalay ka dhacay magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya.
Garabyada Hubeysan ee ka dagaallama dalka Suuriya oo isku raacay dhistaanka Dowlad Islaami ah. (DAAWO)
Written by Maamul on 19 November 2012. Kulan ballaaran oo ay yeesheen qaar ka tirsan Jamaacaadka islaamiga ah ee ka dagaallama dalka Suuriya Ciidanka Mujaahidiinta oo xalay weerar xoog leh ku qaaday garoonka Diyaaradaha Kismaayo. Written by gobal on 19 November 2012. Ciidanka Mujaahidiinta Wilaayada Islaamiga gobolada Jubooyinka ayaa xalay weerar xoog leh ku qaadeen Sh.Cali Jabal "Howlgalada Mujaahidiinta Ee Muqdisho si Xowlli ah ayay ku socdaan" Dhagayso.
Written by Maamul on 19 November 2012. Wilaayada Banaadir aya faah faahin ka bixisay xaaladda wilaayada iyo halka ay marayaan howlgalada ka Dagaal Khasaara Badan dhaliyay oo Ciidanka Itoobiya iyo Mujaahidiinta ku dhaxmaray duleedka Xudur.
Written by Maamul on 19 November 2012. Faah faahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo wilaayada Bay iyo Bakool ku dhaxmaray Haddii aan Tago aanse lay Tabin waa inaan wax Tari jirin!(Maqaal).
Written by Maamul on 19 November 2012. Mahad ideylkeed Allaah ayay usugnaatay,nabadgalyo iyo naxariisina nabi Muxamed korkiisa ha ahaato. Qaraxyo xalay ka dhacay xaafadaha Magaalada Muqdisho. Written by gobal on 19 November 2012. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho aya waxay sheegayaan xalay saddex qaraxyo oo is ixg xiga ay ka Qarax gaari bas ah lagula beegsaday Kaniisada Steresa oo ku taala Xaafada Islii. Written by gobal on 18 November 2012. Wararka naga soo gaaraya Magaalada Neyroobi ayaa waxay sheegayaan in ay sii kordhayaan qasaaraha ka Magaalada Albookamal Oo Kacdoon Wadayaasha Ugacan gashay, iyo Xalab oo aan dhinac u dhicin. Written by Maamul on 18 November 2012. Xoogaga kacdoon wadayaasha wadanka Suuriya ayaa qarka usaaran in ay lawareegaan talada wadankaasi kadib Dagaallo Culus oo Kismaayo ka dhacay.
Written by Maamul on 18 November 2012. Ciidamada wilaayada Islaamiga Jubbooyinka ayaa xalay dagaallo culus ka galay gudaha magaalada Kismayo Spain police march against budget cuts.
Written by Maamul on 18 November 2012. Thousands of police officers from all over Spain have marched toward the government headquarters in Scots condemn Israeli ‘massacre’ in Gaza
Written by Maamul on 18 November 2012. Hundreds of British demonstrators in the city of Edinburgh have joined those in the capital London Wararkii Ugu dambeeyay Ee Duulaanka Gazza,mujaahidiinta oo Doon ka gubay Yahuudda (Warbixin).
Written by Maamul on 18 November 2012. Ciidamada Yahuuda ayaa maalintii 4-aad sii wada duqeymaha wuxushnimada ah oo ay ku garaacayaan shacabka Wareysi: Sheekh Cali Dheere oo arrimo badan ka hadlay.
Written by Maamul on 18 November 2012. Idaacadda Islaamiga Alfurqaan ayaa warewysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya Islamarkaana maqal Ciidamada Mujaahidiinta Oo Dagaal ku galay Ceelwaaq.
Written by gobal on 18 November 2012. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo waxay sheegayaan in Ciidamada XSHM ay weerar ku qaadeen Saldhig ay Daawo Sawirada Xasuuqa ku socda Walaalaha Falasdiin.
Written by Maamul on 18 November 2012. Waxaa wali Walaalaheen Reer Falastiin ku socda duqayntii iyo xasuuqii ciidamada Yuhuuddu u gaysanayaan Dagaallo ka dhacay No.50 iyo Ceelasha Biyaha. Written by gobal on 17 November 2012. Ciidamada XSHM ayaa xalay weerar culus ku qaaday Saldhig Maleeshiyada DF ay ku leeyihiin deegaanka Ceelasha Diyaarad Dagaal oo Isra'iil lagasoo riday iyo Sawaariikhda Muqaawamada oo Tala'biib Garaacday.
Written by Maamul on 17 November 2012. Yahuudda Sahyuuniyadda ayaa iska caabin xoogan kala kulmaysa shacabka muslimiinta Filasdiin iyo wiilashooda Qarax aad u culus oo gil gilay bartamaha magaalada Baydhabo. Written by gobal on 17 November 2012. Qarax aad u xoogan ayaa daqiiqado ka hor ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, Faroole iyo Xisbigiisa Bugta ah oo la cambaareeyay.
Written by Maamul on 17 November 2012. Hoggaamiyaha maamulka Ashahaadda ladirirka Puntland Cabdi Raxmaan Faroole ayaa dhawaan ku dhawaaqay Todobaadka iyo Tirakoobka Howlgalada Mujaahidiinta Somaliya (Tirakoob).
Written by Maamul on 17 November 2012. Idaacadda Islaamiga Andalus oo ku hadasha Afka XSHM lagana dhagaysto gobolada dhaca Koonfurta iyo bartamaha Start«71727374757677787980»End	Si Fudud ubaro Qur'aanka Adigoo Joogo Gurigaaga Online Riix Halkan